Wararka Maanta: Axad, Apr 14, 2019-Puntland oo sheegtay in duqeyn lagu dilay ku-xigeenka hoggaamiyaha Daacish
"Duqeyn duhurnimadii maanta lala eegtay gaari uu watay kuxigeenkii hoggaamiyaha Daacishta Soomaaliya Cabdixakiin Dhoqob iyo ku xigeenkiisa lagu diley". ayuu yiri amniga Puntland Cabdisamad Gallan oo la hadlay idaacadda VOA-da.
Wasiir Gallan, waxa kalo uu sheegay in guud ahaanba gaarigii ay saarnaayeen labadan sarkaal la gubay balse ma sheegin ciddii fulisay duqeyntanta oo maanta dhacday laguna dilay Cabdixakiim Dhoqobeed oo ah ku xigeenka Sheekh Cabdulqaadir Muumin.
Illaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay kooxda Daacish ee ka howlgasha dalka Soomaaliya.
4/14/2019 12:57 AM EST
Axad, April, 14, 2019 (HOL)–Guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha Guurtidda ayaa ka dayriyey xaaladda guud ee uu ku sugan yahay cisbitaalka guud ee dawladdu maamusho,isla markaana sheegay in loo baahan yahay in degdeg wax looga qabto.